Voanjo misy ham, tongolo ary atody nandrahoina | Recipe ao an-dakozia
Voanjo misy hena, tongolo ary atody nandrahoina
Maria vazquez | | Sakafo nentim-paharazana, Resety legioma
Misy zavatra tsotra kokoa noho ny pitipoà sasany misy ham? ATSINANANA mahazatra ny gastronomy misy antsika Safidy tsara foana io rehefa tsy manam-potoana firahoana mahandro isika. Satria 10 minitra dia ampy hanompoana azy ireo eo ambony latabatra sy hankafizanao sakafo matsiro.
Ao an-trano dia tianay ny mampiditra an'ity lovia ity a tongolo be dia be. Tsy haiko raha efa nilaza taminao aho, fa ao an-trano dia misidina tongolo! Toa anay daholo ny zava-drehetra fa matsiro kokoa miaraka amin'ny tongolo kely, mitovy aminao ve no mitranga? Ary izany no zava-misy, ary na dia tsy maintsy manokana minitra vitsy hafa hanomanana ity lovia ity aza isika, dia tsy afaka hamela azy hiala amin'ity lovia ity.
Ny singa fahefatra amin'ity lovia ity, ilay lavaka nandrahoina, vao mainka mameno azy io. Atody voatoto no safidintsika ankafizinay indrindra, fa ny atody nandrahoina, raha mbola omaninareo mialoha izy ireo, dia loharano mora sy haingana. Ary indraindray, mandresy ny fampiononana. Tianao ve ity lovia ity? Ahoana no fanomanana azy?
Ny pitipoà misy ham dia karazan-tsakafo entin-tsika. Tao an-trano dia nahandro azy ireo tamin'ny tongolo sy atody nandrahoina.
Fotoana hiketrehana: 12 M
Fotoana manontolo: 17 M
Tongolo fotsy 1, julienned
Voanjo mangatsiaka 2 kaopy
80 g. an'ny cubes ham
Afana ao anaty lapoaly ny menaka afrikanina ary asehoy ny tongolo amin'ny hafanana ambany ambany mandritra ny 10 minitra. Aorian'io fotoana io, ampio ny ham sy ny saute mandritra ny roa minitra.
Mandritra izany fotoana izany, ao anaty vilany, andao mahandro ny voanjo anaty rano be mandritra ny 4 minitra.
Isika dia manary ny voanjo ary manompo azy ireo miaraka amin'ny tongolo sy ham.
Ataovy am-boanjo miaraka amin'ny atody efa nandrahoina ny pitipoà, tapaho roa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: firosoana » vilia » Resety legioma » Voanjo misy hena, tongolo ary atody nandrahoina
Soso amin'ny saosy tongolo
Salady voatabia sy mozarella